30 tattoos asal ah oo ku saabsan naqshadeynta garaafka | Abuurista khadka tooska ah
30 tattoos asal ah oo ku saabsan naqshadeynta garaafka
Miyaad ka fikireysaa inaad hesho tattoo la xiriira adduunka naqshadeynta garaafka? Hadday sidaas tahay, waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso fikradaha qaarkood ee u adeega dhiirrigelinta waxaanan leeyahay dhiirrigelin maxaa yeelay haddii aad tahay naqshadeeye oo aad rabto inaad sawir qaaddo ... Sow maahan inaad adigu sameysatid Intaas waxaa sii dheer, waxaan aaminsanahay in tattoo kasta ay ahaato mid u gaar ah oo shaqsi ahaaneed mid kasta. Aniga shaqsiyan awoodi kari maayo inaan naqshad ka soo qaato buugga tatooga sababo kala duwan awgood. Marka hore, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in haddii aad go'aansato inaad fariin maqaarkaaga ah si joogto ah u dhexgasho, waa inuu kuu ahaadaa farriin muhiim kuu ah oo la xiriirta noloshaada, ma aqaan, sheeko sheeko ama wax uun adigu iska leh. Dhinaca kale ... Miyaad qiyaasi kartaa la kulanka qof leh tattoo kuu eg oo kale? Miyaadan dareemayn wax ... Cajiib? Si kastaba ha noqotee, dhadhaminta midabada. Runtii waxaa jira dariiqooyin badan oo lagu matali karo xiisaha aad u qabto adduunkan, qaar ka caqli badan kuwa kalena ka yar.
Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ku siiyo fiilo isla markaana aan kula wadaago xulashada nashqadaha asalka ah ee ay fahmi karaan kaliya kuweena ka shaqeeya adduunka sawirka Qaababka midabka, sawirada, sanduuqyada aaladda, sawirada, iyo xitaa isdhexgalka arjiga. Dabcan, waxaa jira nashqado qaarkood oo u baahan geesinimo ka badan kuwa kale laakiin taasi waxay kuxirantahay shaqsiyadda qof walba. Shakhsiyan, haddii aan mid yeelan lahaa, waxaan dooran lahaa ikhtiyaar ikhtiyaar ah. Ma leedahay tattoo lamid ah? Ma na tusi kartaa? Noo soo dir adoo adeegsanaya faallo ku saabsan shabakadaha bulshada ama farriin gaar ah. Sidoo kale, haddii aad hayso fikrado asal ah waad noo sheegi kartaa ... Ha is jarin!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 30 tattoos asal ah oo ku saabsan naqshadeynta garaafka
9 talooyin ku saabsan sawir qaadista xeebta
60 logos aad u xariif ah oo ku dhiirrigelin doona